किन आक्रामक छन् प्रचण्ड ? - Vishwa News
किन आक्रामक छन् प्रचण्ड ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकसाता यता नेपालमा छैनन् । नेपालमा सरकारको नेतृत्व कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रुपमा इश्वर पोखरेलले गरिरहेका छन् भने नेकपाको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले ।
जुन दिन प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थोपचारका सिलसिलामा सिंगापुरतर्फ लागे, त्यसै रात प्रचण्ड यूएईबाट श्रीमती सिताको उपचार गरी स्वदेश फर्किए ।
जब प्रचण्ड नेपाल फर्किए , तब उनको आक्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छन् । एक साताको अवधिमा उनले पूर्वराजादेखि आफूलाई १७ हजार मानिसको हताहतीको नेतृत्व गरेको भन्दै लाग्ने आरोपको पनि कडा शब्दमा खण्डन गर्न भ्याएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले यसबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट पनि बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिए । यही अवधिमै उनले आफूलाई हेग लगे हिरो बनेर निस्कने अभिव्यक्ति दिए ।
यसै समयमा आफूले विद्रोहको नेतृत्व गरेको भएपनि हत्या हिंसामा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पटिकरण दिन भ्याए ।
शनिबार समेत अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि कसैले उल्ट्याउन नसक्ने दाबी गरे ।
निरन्तर राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रचण्ड आखिर जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताका रुपमा अझै किन असुरक्षित महसुश गर्छन् ?
यो प्रश्न भने किनै गम्भीर छ । किनकी प्रचण्डले दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसके । शान्ती प्रक्रियालाई शान्तपूर्ण रुपमा अवतरण गराएर मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट पार लगाए ।
लडाकुको सहज समायोजनमार्फत सम्भावित जोखिम कम गराए । देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्वसमेत गरे ।
जनसमर्थन पनि उनको पक्षमा छ । तर पनि बेला बेला किन उनी झस्किन्छन् ?
जानकारकारहरुका अनुसार उनीमाथि पूर्वराजा तथा पंचायती पक्षधर कसैले हेगमा मुद्दाको धम्की दिएको हुन सक्छ ।
त्यसकारण उनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै चलखेल नगर्न पूर्वराजालाई सचेत गराइरहन्छन् । अर्कोतर्फ उनी अझै पनि कार्यकारी शक्तिमा लालायीत गुण भएका व्यक्ति हुन् ।
उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली नेपालमा नभएको मौकामा दिने कडा अभिव्यक्तिबाट म कार्यकारी शक्ति मै छ है भनी जनमानसलाई सचेत गराइरहेको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । आखिर प्रचण्ड किन आक्रामक छन् ? यसको जवाफ केही समय भित्रै स्वयमः उनैले दिनेछन् या घटनाक्रमले त्यसको संकेत गर्नेछ ।
नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २६ पुग्यो, २४ घण्टामा दुई जनाको निधन